प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - भर्जिनियामा गर्भपतनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
तल बिरामीहरु द्वारा केहि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु छन्।
यदि तपाईंसँग अतिरिक्त प्रश्नहरू छन् वा स्पष्टीकरणको आवश्यक छ भने कृपया हाम्रा एक बिरामी शिक्षक वा मेडिकल स्टाफलाई सोध्नुहोस् जब तपाईं अपोइन्टमेन्टको लागि आउनुहुन्छ वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
यहाँ प्रस्तुत जानकारी शिक्षा उद्देश्यका लागि मात्र हो। यो जानकारी यद्यपि सही ठानिन्छ ग्यारेन्टी गरिएको छैन; यो व्याख्या, त्रुटि वा बेवास्ताको विषय हुन सक्छ।
निश्चित छैन कति गर्भावस्थामा तपाईं हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् प्रेजेन्सी क्यालकुलेटर
के गर्भपतन सुरक्षित छ?
गर्भपतन धेरै सुरक्षित छ, विशेष गरी जब गर्भावस्थामा प्रारम्भिक समयमा। धेरै अध्ययनहरू गरिएको छ जुन पहिलो तिमाहीमा गर्भपतन हुनु बच्चा जन्माउनु भन्दा धेरै पटक सुरक्षित हुन्छ भनेर देखाउँदछ। पछिल्लो गर्भपात पनि बच्चा जन्माउने भन्दा कम खतरनाक हुन्छ। https://rewirenewsgroup.com/article/2008/01/11/four-abortion-myths-dispelled/
के गर्भपतन चोट पुग्छ?
हामी सबैसँग पीडाको प्रतिक्रिया र प्रतिक्रियाका साथ भिन्नै अनुभवहरू छन्। पीडा नियन्त्रण गर्न बिभिन्न डाक्टरहरूले बिभिन्न तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्। हाम्रो केन्द्रमा आकांक्षा डी एन्ड सी विधि प्रयोगको साथ, त्यहाँ केहि मिनेटहरू तान्न सक्छ। जे होस् यो दुखाइदेखि डराउनु सामान्य हो, पीडाको डर तपाईको निर्णयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हुनु हुँदैन। तपाईंलाई पीडासँग मद्दत गर्न औषधि प्रस्ताव गरिने छ र तपाईंको आरामलाई बढाउन धेरै उपचारात्मक उपायहरू दिइनेछ। हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षकहरूले तपाईंलाई कुन विकल्प तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ: औषधीको साथ जागृत गर्दा तपाईंको आराममा मद्दतको लागि, निदाएको बेला, वा मेडिकल गर्भपतन घरमै गर्भपतन प्रयोग गरी गर्भपतन।
चिकित्सा / औषधि गर्भपतन भनेको के हो? के त्यो गर्भपात गोली हो?
हो। यी सबै सर्तहरू उही सुरक्षित र प्रभावशाली गर्भपतन विधिलाई जनाउँछ जुन हामी st हप्ताको गर्भकालीन उमेरसम्म प्रदान गर्दछौं। थप जानकारीको लागि, हाम्रो हेर्नुहोस् मेडिकल गर्भपात पृष्ठ.
प्रक्रियात्मक गर्भपात के हो?
एक प्रक्रियात्मक गर्भपात, जसलाई आकांक्षा गर्भपात पनि भनिन्छ, सामान्यतया भनिने विधिद्वारा प्रशासित हुन्छ भ्याकुम आकांक्षा। प्रक्रिया आफैंमा सामान्यतया केवल पाँच देखि १० मिनेट लिन्छ, र यो एक सामान्य इन-अफिस स्त्रीरोग सेवा हो। तपाईं हाम्रो मा अधिक पाउन सक्नुहुन्छ प्रक्रियात्मक गर्भपात पृष्ठ। प्रक्रियात्मक गर्भपात १st हप्ता, days दिनको गर्भकालीन उमेरमा प्रस्ताव गरिएको छ।
मेरो गर्भावस्था कति दूर छ? कति हप्ता?
An अनुमानित गर्भावस्था को हप्ता को मापन तपाईंको अन्तिम मासिक अवधि को मिति बाट गणना गर्न सकिन्छ। हामीले प्रदान गरेका छौं गर्भावस्था क्यालकुलेटर जसले तपाईंलाई तपाईंको अन्तिम अवधिको मिति प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ एक अनुमान प्रदान गर्नुहोस्।
कृपया सम्झनु: केवल एक परीक्षा, गर्भावस्था परीक्षण, वा एक चिकित्सक द्वारा अल्ट्रासाउन्ड गर्भावस्था र गर्भावस्था को लम्बाई लम्बाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। छुटेको अवधिको अर्थ यो होइन कि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ, र एक पीरियड हुनु भनेको तपाईं हुनुहुन्छ भन्ने होइन छैन गर्भवती
तपाईंको गर्भपात नियुक्ति
COVID-19 संग, भेटघाटको बारेमा के फरक छ?
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरले सबैको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई गम्भीरताका साथ लिन्छ, र हामीले हाम्रा बिरामी र स्टाफका लागि COVID-१ to लाई न्यूनतम गर्न उपायहरू आरम्भ गरेका छौं। तपाईं हाम्रो मुख्य बुलेटिन यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: FCHC र COVID-19।
तपाईको स्वास्थ्य र हाम्रो स्टाफको सुरक्षा गर्नको लागि:
हामी यस समयमा केवल हाम्रो अफिस र लबीमा बिरामीहरूलाई स्वागत गरिरहेका छौं। भवनमा एक छोटो अवधिको "प्रतीक्षा क्षेत्र" छ तर साझेदारहरू र समर्थन व्यक्तिहरूको लागि केन्द्रको बाहिर।
हाम्रो प्रवेशद्वारमा हाम्रो चेक-ईन क्षेत्रमा तपाइँको तापक्रम लिईनेछ र तपाइँ एक COVID सर्वेक्षण फाराम पूरा गर्नुहुनेछ भनेर पुष्टि गर्दै कि तपाइँ लक्षणहरू अनुभव गरिरहनु भएको छैन। हामी तपाइँलाई यो स्वीकार गर्न पनि सोध्छौं कि हामी हाम्रो बिरामीहरू र स्टाफलाई बचाउन सम्पर्क ट्रेसिagingमा संलग्न छौं।
हाम्रो बिरामी र स्टाफ हुनु पर्छ मास्क लगाउ ठीक छ केन्द्रको भित्र सबै समय। आवश्यक परेमा हामी तपाईलाई एउटा प्रदान गर्न सक्छौं।
हाम्रो बिरामीहरू र कर्मचारीहरूले सेन्टरमा प्रवेश गर्नु अघि उनीहरूको हात धुनुपर्छ वा कीटाणुशोधन गर्नु पर्छ।
बिरामीहरूलाई क्लिपबोर्ड र कलम प्रयोग गरी सम्पूर्ण यात्राको माध्यमबाट दिइन्छ। हामी तपाईलाई "OCCUPIED" चिन्ह दिन्छौं हाम्रो लबीमा तपाईंको सीटको लागि निश्चित गर्न कि सबैजनाले आ-आफ्नो कुर्सी प्रयोग गर्दछन्।
हामी अनुरोध गर्दछौं कि तपाईंले आफ्नो इन्टेक पेपरवर्क पूर्ण र सबमिट गर्नुहोस् अनलाइन। तपाइँसँग तपाइँको अपोइन्टमेन्टमा समीक्षा गर्ने अवसर हुनेछ।
के मैले छुट्टै अल्ट्रासाउन्ड अपोइन्टमेन्ट गर्नु पर्छ?
सं जुलाई १, २०२० सम्म, भर्जिनियाको प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन (आरएचपीए) लाई लागू गरियो, जसले अनिवार्य अल्ट्रासाउन्ड र पर्खाइ अवधिको लागि राज्यको आवश्यकतालाई हटायो! यो हो राम्रो समाचार - जस्तो कि हामी विश्वास गर्छौं कि बिरामी र डाक्टरको बिचमा कुनै हस्तक्षेप बिना मेडिकल केयरको निर्णय लिनु पर्दछ।
म केन्द्रमा कति लामो हुनेछु?
हामी तपाईंलाई तपाईंको टेलिल्थ सेशनको फाइदा लिन तपाईंको व्यक्ति-नियुक्ति अघि प्रोत्साहन दिन्छौं। टेलिल्थ सेसनले हाम्रो बिरामी शिक्षकलाई तपाईंको बिरामी फारमहरू समीक्षा गर्न र कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन मद्दत पुर्‍याउँछ। यो तपाइँको व्यक्तिगत-अपोइन्टमेन्टको लागि केन्द्रमा हुनु आवश्यक समयको मात्रा कम हुनेछ।
मेडिकल गर्भपात: यदि तपाईंले आफ्नो टेलिहेल्थ सत्र पूरा गर्नु भएको छ भने, कृपया कार्यालयमा हुन तयार हुनुहोस् 1 1 /2घण्टा प्रयोगशाला सेवाहरू र तपाईंको मेडिकल गर्भपात पूरा गर्न। यदि तपाईं टेलिहेल्थ सेसन पूरा गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, २ का लागि हामीसँग हुन तयार हुनुहोस् घण्टा दर्ता पूरा गर्न, बिरामी फारमहरू, प्रयोगशाला सेवाहरू, हाम्रो मेडिकल स्टाफको परामर्श र तपाईंको मेडिकल गर्भपतन।
प्रक्रियात्मक गर्भपात: यदि तपाईंले आफ्नो टेलिहेल्थ सत्र पूरा गर्नु भएको छ भने, कृपया कार्यालयमा हुन तयार हुनुहोस्21 /2घण्टा प्रयोगशाला सेवाहरू र तपाईंको प्रक्रिया पूरा गर्न। यदि तपाईं टेलिहेल्थ सेसन सम्पन्न गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, हामीसँगको लागि तयार हुनको लागि3घण्टा दर्ता पूरा गर्न, बिरामी फारमहरू, प्रयोगशाला सेवाहरू, हाम्रो मेडिकल स्टाफको परामर्श र तपाईंको प्रक्रियाको लागि। यदि तपाईंको अन्तिम अवधि १२ हप्ता भन्दा बढि अघि थियो भने, केन्द्रमा हुन योजना बनाउनुहोस्4घण्टा।
आरएच रक्त परीक्षण के हो?
प्रत्येक व्यक्तिको रगत चार प्रमुख प्रकारमध्ये एक हो: A, B, AB, वा O. रक्त प्रकारहरू रक्त कोषहरूमा एन्टिजेन्सको प्रकारद्वारा निर्धारण गरिन्छ। एन्टीजेन्स रक्त कोषहरूको सतहमा प्रोटिनहरू हुन्छन् जसले प्रतिरोधात्मक प्रणालीबाट प्रतिक्रिया ल्याउन सक्छ। आरएच कारक रातो रक्त कोशिकाको सतहमा एक प्रकारको प्रोटीन हो। अधिकांश व्यक्ति जोसँग आरएच कारक छन् आरएच पॉजिटिभ छन्। जोसँग आरएच कारक छैन तिनीहरू आरएच negativeणात्मक छन्।
आरएच कारक परीक्षण एक नियमित परीक्षण हो जुन तपाईंको रक्त परीक्षणमा समावेश छ। यदि तपाईंको रगतमा आरएच एन्टिजेनको अभाव छ भने, यसलाई आरएच-नेगेटिभ भनिन्छ। यदि यसमा एन्टिजेन छ भने, यसलाई आरएच पॉजिटिभ भनिन्छ। यदि तपाईं आरएच negativeणात्मक हुनुहुन्छ भने, तपाईं गर्भपतन पछि आरएच इम्युनोग्लोबुलिन भनिने औषधि प्राप्त गर्नुहुनेछ। आरएच इम्युनोग्लोबुलिन एक रगत उत्पादन हो जुन आरएच-नकारात्मक आमाको संवेदनशीलता रोक्न सक्छ।
लगभग 15% मानिसहरु को आरएच नकारात्मक छ।
आरएच कारकले एक व्यक्तिको सामान्य स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन। जहाँसम्म, बच्चाको रगतमा आरएच कारक छ र आमाको रगत नभएको गर्भावस्थामा समस्याहरू हुन सक्छ, यद्यपि इम्युनोग्लोबुलिन (आरएचआईजी) औषधि प्रयोग गरेर धेरै जसो अवस्थामा यसलाई रोक्न सकिन्छ।
के म मेरो नियुक्ति भन्दा पहिले खान सक्छु?
यो तपाइँको प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ। यदि तपाईंको अपोइन्टमेन्ट एक औषधि ("गोली") वा "जागृत" प्रक्रियाको लागि हो भने, तपाईले आफ्नो नियुक्ति भन्दा पहिले हल्का खाना खान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको अपोइन्टमेन्ट IV सेडेशन प्रक्रियात्मक गर्भपात (सुतेको बेला) को लागि हो भने, आफ्नो नियुक्ति समय भन्दा hours घण्टा अघि खान, पिउने, गम च्यु वा धुम्रपान नगर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो आवश्यक औषधिहरू पानीको चुस्कीसहित लिन सक्नुहुन्छ।
के म मेरो भेट पछि खान सक्छु?
हो, वास्तवमा तपाईंलाई पुन: प्राप्ति कोठामा क्र्याकरहरू, कुकिज, जुस, चिया वा सोडा प्रस्ताव गरिने छ। या त एक चिकित्सा वा शल्य प्रक्रिया पछि तपाईं आफ्नो सामान्य तालिका पुनःसुरु गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई हल्का, कम फ्याट र सजिलो खाना पचाउनको लागि सुरुमा चयन गर्नुहोस्।
के म मेरो भेट पछि गाडी चलाउन सक्छु?
यो तपाइँको प्रक्रिया मा निर्भर गर्दछ। एक मेडिकल (गोली) गर्भपतन वा जागृतको लागि (स्थानीय एनेस्थेटिक) प्रक्रियागत गर्भपातका लागि, तपाईं आफैले गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ (तर कसैले तपाईंलाई गाडी चलाउन सक्छ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने)। कसरी तपाइँसँग तपाइँको प्रक्रिया को लागी बेहोश / एनेस्थेसिया छ (सुत्नेछ), तपाई आफैले घर चलाउन सक्नुहुन्न। कृपया कसैलाई घर चलाउन लगाउनुहोस् (प्राथमिकता दिनुहुने कोही तपाईंलाई भित्र पस्न र बसोबास गर्न मद्दत गर्दछ) किनकि तपाईं आफैले घर चलाउन सक्नुहुन्न। हामी सिफारिस गर्दछौं कम्तिमा थप driving घण्टा सम्म ड्राईभ नगरी।
म कहिले यौन सम्बन्ध राख्न सक्छु?
हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षकहरूले तपाईसँग यसबारे थप छलफल गर्नेछन्, तर हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईको योनीमा कुनै कुरा घुसाउनबाट जोगिनुहोस् सात दिन तपाइँको संक्रमण को जोखिम कम गर्न।
के म फेरि गर्भवती हुन सक्छु?
हो प्रजनन क्षमताको साथ तपाईंको व्यक्तिगत अनुभव पहिले जस्तै जारी रहनेछ। धेरैले यसलाई गर्भपतन गरे पछि गर्भवती हुन अझ सजिलो भएकोमा छक्क पारे! डी एन्ड सी प्रक्रिया स्त्री रोगशास्त्रमा धेरै प्रयोग गर्दछ प्रजनन उपचारको लागि पहिलो चरण सहित। एउटा कारण यो छ कि जन्म नियन्त्रण विकल्पहरू हाम्रो केन्द्रको स्वास्थ्य शिक्षाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले छान्नु भएको विकल्प तुरून्त प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस्।
गर्भपतन भएपछि म भावनात्मक रूपमा कस्तो महसुस गर्छु?
सबैको भावनात्मक प्रतिक्रिया उनीहरूको गर्भपतन भन्दा फरक हुन्छ - र ती सबै मान्य छन्। अध्ययनहरूले देखाए कि समयसँगै, धेरै जसो गर्भपात छनौट गर्दछन् छैन उनीहरूको निर्णयको बारेमा दु: ख महसुस गर्नुहोस्, बरु राहत।
गर्भपात कुराकानी परियोजना को बारे मा एक विस्तृत सेक्सन छ एक गर्भपतन पछि स्वस्थ कोपी .्ग जुन हामी तपाईंलाई पढ्न सुझाव दिन्छौं। हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि हेर्नुहोस् गर्भपतन हुनु अघि र पछाडि जसमा धेरै परामर्श भिडियोहरू र संसाधनहरू सामेल छन्।
यदि तपाइँलाई लाग्छ कि यसले कसैसँग तपाइँको अनुभवको बारेमा कुरा गर्न मद्दत गर्दछ भने, हामी निम्न संसाधनहरू सुझाव दिन सक्छौं जुनसँग गर्भपतन पश्चात परामर्शको अनुभव छ र जसले तपाइँको निर्णयको फैसला गर्दैन।
मारिया इन्स बटलर, MSW, LCSW
https://thrivetherapycenter.com/therapists 10560 मुख्य सडक सुइट # PH4 फेयरफ्याक्स, VA 22030 703-507-0963 | Se habla español
डानिल एस ड्रेक, पीएचडी
https://www.danilledrakephd.com/ १131१ ग्रेट फल्स स्ट्रीट, सुइट १०१ फल्स चर्च, VA, २२०101 22046०703-532२--0221२२१
बोनी आर सोबेल, RN, LCSW, BCD
http://www.bonniersobel.com/ 7643 लेसबर्ग पाइक फल्स चर्च, VA, २२ 22043-703 969०7871--XNUMX-XNUMX१
युवाहरूको उमेरका लागि जानकारी १ 18
जन्म कन्ट्रोल / CONTRACEPTION
गर्भनिरोधकहरूले कसरी काम गर्छन्?
तिनीहरू केवल काम गर्दछ जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग! अमेरिकी प्रेस विज्ञप्ति र स्त्री रोग विशेषज्ञ (एसीओजी) को एक धेरै उपयोगी सिर्जना गरेको छ सोधिने प्रश्न जुन जन्म नियन्त्रणको हरेक प्रकारका बीचमा जान्छ।
तपाईं पनि जान सक्नुहुन्छ bedsider.org कुन जन्म नियन्त्रण विधि तपाइँको लागि उत्तम हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउन। जन्म नियन्त्रण एक एक आकार-फिट-सबै छैन र त्यसैले यो तपाइँको लागि काम गर्दछ कि एक जन्म नियन्त्रण विधि खोज्नको लागि तपाइँको आवश्यकताहरू विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ!
आपतकालीन गर्भनिरोधक भनेको के हो?
आपतकालीन गर्भनिरोधक एक ओवर-द-काउन्टर जन्म नियन्त्रण हो जुन सेक्स पछि गर्भावस्था रोक्दछ। तपाईं अहिले नै आपतकालीन गर्भनिरोधक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा सेक्स पछि days दिन सम्म यदि तपाईं आफ्नो जन्म नियन्त्रण असफल भएको सोच्नुहुन्छ भने, तपाईंले गर्भनिरोध प्रयोग गर्नुभएन, वा तपाईंलाई यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य तुल्याइएको छ। आपतकालिन गर्भनिरोधले यसले गर्भवती हुने कम सम्भावना गर्दछ। यो जन्म नियन्त्रण लिनु अघि जत्तिकै प्रभावकारी छैन, त्यसैले यदि तपाईं यौन सक्रिय हुनुहुन्छ वा हुनको लागि योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, आपतकालीन गर्भनिरोधकमा भरोसा नगर्नुहोस् किनभने तपाईंको गर्भावस्था विरुद्धको सुरक्षा मात्र हो। आपतकालीन गर्भनिरोध यौन यौन संक्रमणको बिरूद्ध संरक्षण गर्दैन।
मसँग वार्षिक GYN ("राम्रो महिला") किन परीक्षा हुनु पर्छ?
हामी आर एन शार्ला टेलरको, एट अल, विश्वविद्यालय आयोवा डिपार्टमेन्ट ओब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाईन्कोलॉजी, उत्तर चाहन्छौं:
“हाम्रो जीवनभर, हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्। यी छनौटहरूले हाम्रो परिवार, मित्रहरू, रोजगारदाताहरू, र अन्तिम तर कम्तिमा होइन, हामीलाई असर गर्छ। आज हामीले गर्ने छनौटहरूले भविष्यमा गर्नु पर्ने छनौटहरूलाई असर गर्दछ। स्वास्थ्य देखभाल विकल्पहरू जस्तै आहार, व्यायाम, स्वास्थ्य आदतहरू, र शारीरिक परीक्षणहरू हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुन सक्छन्। हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो सब भन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति हो, यद्यपि प्रायः हामी आफ्नो शारीरिक आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्दछौं वा बानी विकास गर्छ जसले हामीलाई हानि पुर्‍याउँछ। एउटा राम्रो छनौट जुन हामी राम्रो स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बनाउन सक्छौं एक वार्षिक स्त्रीरोग जाँच र तपाईंको मेडिकल ईतिहासमा निर्भर रहनु। Pap Smear, एक सरल परीक्षण जुन धेरै समय वा असुविधा समावेश गर्दैन। प्याप स्मीयरले गर्भाशय (गर्भाशयको खोल्ने) वा योनी (जन्म नहर) को सम्भावित समस्याहरू पत्ता लगाउँदछ त्यसैले तिनीहरूलाई निदान र उपचार गर्न सकिन्छ। तपाईंको वार्षिक परीक्षणको लागि अर्को राम्रो कारण यो छ किनभने तपाईंको स्वास्थ्य पेशेवरले पनि स्तन परीक्षण, रक्तचाप जाँच, श्रोणि जाँच गर्नेछ र तपाईंको मुटु र फोक्सो सुन्नेछ। अन्य परीक्षणहरू तपाइँको आवश्यकता र स्वास्थ्य ईतिहासको आधारमा गर्न सकिन्छ। तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा राम्रो लाग्छ र तपाई त्यसरी रहनको लागि तपाईले गरिरहनु भएको छ। "
के यो पापा परीक्षण उपयोगी छ यदि यो मासिक धर्मको समयमा गरिन्छ?
यानी, मलाई कहिले थाहा हुँदैन जब मेरो अवधि कहिले आउँछ। यदि म मेरो अवधिको बृद्धि भइरहेको देख्छु भने के म फेरि रक्तस्राव बन्द हुनुपर्दछ?
किनभने पापा स्मीयर परीक्षण परिणामहरू अधिक सटीक हुन्छन् जब मासिक धर्म हुन्छ छैन अवस्थित हुन्छ, तपाईको अपोइन्टमेन्टको लागि तालिका बनाउने, वा पुनः अनुसूची गर्न उत्तम हुन्छ ताकि यो तपाईको अवधिमा छैन। (यद्यपि यो अव्यवहारिक हुन सक्छ यदि तपाईं निष्क्रिय गर्भाशय रक्तस्राव वा अनियमित मासिक धर्म हुनुहुन्छ भने।) पापा स्मीयर जाँचको लागि उत्तम समय मासिक प्रवाहको अन्त भएको दुई हप्ताको अवधिमा हुन्छ। यसमा छलफल गर्नुहोस् हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षकहरू मध्ये एकसँग जब तपाईं कल गर्नुहुन्छ।
को असामान्य pap परिणामहरु को लागी अधिक जोखिम मा छ?
तपाईलाई असामान्य पाप परिणामहरूको लागि अधिक जोखिम हुन सक्छ यदि:
तपाईंको उमेर १ before भन्दा पहिले यौन सम्पर्क राख्नु भएको छ
तपाईंसँग बहु साझेदारहरूको साथ एक यौन इतिहास छ
तपाईको आमाले DES (Di-Ethyl-Stilbestrol) लिई - एक औषधि, जुन १ 1940 s० देखि १ 1960 s० को अवधिमा निश्चित गर्भावस्था जटिलताको लागि लिएको थियो
तपाईलाई बारम्बार संक्रमण हुन्छ जुन यौन सम्पर्कको माध्यमबाट फैलिन्छ
तिमि चुरोट खान्छु
तपाई १ 18 वर्षको उमेर भन्दा पहिले गर्भवती हुनुभयो
तपाईं एक ट्रान्सजेन्डर मानिस हुनुहुन्छ जससँग लि gender्ग एफर्मिंग हार्मोन थेरापी रहेको छ
म कसरी मेरो सेवाहरु लाई भुक्तान गर्न सक्छु?
शुल्क नगद, मास्टरकार्ड, भिसा, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्यासियर चेक वा मनी अर्डरको साथ भुक्तानी गर्न सकिन्छ। सबै शुल्कहरू सेवाहरू प्रदान गरिएको समयमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ। हामी धेरै प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजनाहरू स्वीकार गर्दछौं र तपाईंको सुविधाहरू जाँच गर्न सक्दछौं; हाम्रो जाँच गर्नुहोस् बीमा वाहक स्वीकृत अधिक जानकारी को लागी सुची।
तपाईं गर्भपतनको लागि भुक्तान गर्न आर्थिक सहयोगको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। कृपया जब तपाइँ तपाइँको नियुक्ति गर्नुहुन्छ अतिरिक्त कोषको लागि योग्यता स्क्रीनिंगको बारेमा हाम्रो एक कर्मचारीलाई कुरा गर्न सोध्नुहोस्।
सेवाहरूको लागि तपाइँ कुन बीमा क्यारियरहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ?
फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरले तल निर्दिष्ट सूचीबद्ध विशिष्ट बीमा प्रदायकहरूसँग काम गर्दछ:
AETNA (HMO, पीपीओ, POS, EPO, HDHP, HSA) CareFrst प्रशासकहरू
AETNA कोभेन्ट्री Cigna (HMO, पीपीओ, OAP, SAR)
AETNA हस्ताक्षर प्रशासकहरु पहिलो स्वास्थ्य नेटवर्क (आपतकालीन GYN मात्र)
एन्थम ब्लू क्रस निलो शिल्ड (HMO, PPO, POS, HDHP) स्वास्थ्य SCOPE लाभ
एन्थम स्वास्थ्यकर्मी (HMO) नवीनता स्वास्थ्य
Anthem Healthkeepers प्लस (GYN मात्र) मेरिटेन स्वास्थ्य (GYN मात्र)
केयर फर्स्ट ब्लू क्रस निलो शिल्ड (HMO, पीपीओ, निलो विकल्प लाभ, निलो च्वाइस प्लस) मल्टिप्लान (बीच स्ट्रिट, PHCS) (GYN मात्र)
यदि बिरामीलाई पक्का थाहा छैन यदि तिनीहरूको बीमा नीतिमा गर्भावस्था वा स्त्री रोग बेनिफिटहरू छन् भने, हामी सिफारिश गर्न सक्दछौं कि उनीहरूले आफ्नो नीति बीमा कार्डको पछाडि उनीहरूको बीमा कार्डको पछाडि कल गर्नू।
बीमा लाभ अस्वीकरण: लाभहरूको प्रमाणिकरण हो छैन कभरेज वा भुक्तानीको स्वीकृति को ग्यारेन्टी लाभहरू योग्यता, आवश्यकताहरू, बहिष्कारहरू र सीमितताहरू सहित सबै योजना प्रावधानहरूको अधीनमा छन्। अन्तिम संकल्प एक पटक दावी समीक्षा र बीमा क्यारियर द्वारा संसाधित गरीनेछ।
महत्वपूर्ण: बीमा वाहक शायद बिरामीको सेवा कभर गर्नुहोस्। यद्यपि धेरै स्वास्थ्य योजनाहरु do एक उच्च कटौतीयोग्य समावेश गर्नुहोस् जुन प्रदायकले उनीहरूले तपाइँका सेवाहरू कभर गर्न सुरू गर्नु अघि पूर्ण भुक्तान गर्न आवश्यक पर्दछ। कृपया बिरामीलाई कभरेज जाँच्न र घटाउन योग्य छ कि छैन भनेर पुष्टि गर्न उनीहरूको प्रदायकको सदस्य सेवाहरू सम्पर्क गर्न सल्लाह दिनुहोस्।
नक्कली क्लिनिकहरूको सावधान!
"संकट गर्भावस्था केन्द्रहरू" के हुन्?
राष्ट्रिय गर्भपात संघ वेबसाइट बाट उद्धरण https://prochoice.org/naf-helps-samantha-bee-expose-crisis-pregnancy-centers/ )